म्याग्दी, २८ माघ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैसरीमा आज भएको बोलेरो जिप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । बेनीदेखि शिख जाँदै गरेको ग ..
तस्करीमा सेनाको नै संलग्नता, दुई पक्राउ
काठमाडौं, २८ माघ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले आइतबार दुई सैनिक र एक सर्वसाधरणलाई गैँडाको खागसहित पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले गैंडाको दुई वटा खागसहित तीन जनालाई पक्राउ ..
काठमाडौँ, २८ माघ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको पार्किङको समस्याका कारण दैनिकजसो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उडानमा रहेका जहाज आकाशमै ‘होल्ड’ हुने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ..
जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्छु : दाहाल
चितवन, २८ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र र जनताको आवश्यकतानुसार आफूले जस्तोसुकै राजनीतिक निर्णय लिन पनि सक्ने बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित प्रथम प्रकाश दाहाल स्मृति ..
एमालेले बुझायो समानुपातिकतर्फको अन्तिम सूची, यी हुन् सांसदहरु
काठमाडौं, २८ माघ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फका सांसदको सूचीको टुङ्गो लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले माग गरेबमोजिम पार्टीले प्राप्त गरेको सिट संख्याअनुसार एमालेले बन्दीसूचीबाट समावेशी समूहसमेत मिलाएर सूची तयार ..
फाइल घुमाइरहने स्थिति अन्त्य गर्छौ – अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ, २८ माघ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्योग स्थापना भई सञ्चालन हुने समयसम्म फाइल नै घुमाइरहने स्थिति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३७औँ ..
५ नं. प्रदेशमा सरकार गठनको दावी प्रस्तुत, शंकर पोखरेल बन्ने भए पहिलो मुख्य मन्त्री
बुटवल, २८ माघ । प्रदेश नम्बर ५ को सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट आज प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा समक्ष बहुमत सहितको दाबी प्रस्तुत गरेकाछन् ।. एमाले संसदिय दलका नेता ..
ट्याङकर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
नुवाकोट, २८ माघ । रसुवाको वेत्रावतीबाट पानी भर्न मैलुङतर्फ जान लागेको ट्याङ्कर उत्तरगया–५ खाल्टेमा दुर्घटना हुँदा चालक नवराज श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । बा २ ख ७४१६ नंं को ट्याङकर ..
प्रदेश ४ एमाले संसदीय दलमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्रीको बाटो खुल्यो
काठमाडौं, २८ माघ । प्रदेश नम्बर ४ को संसदीय दलको नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बन्ने भएका छन् । नेकपा एमालेले आइतबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भन्दै प्रदेश नम्बर ४ ..
काठमाडौँ, २८ माघ । सहकारीको नाममा लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा साइरीयस बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मुकुन्दलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कालीमाटी महानगरीय प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायब ..